Izexwayiso ze-GIF kusongo lwangempela lokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kubukeka kumangalisa, kepha a GIF kungasiqwashisa ngosongo lwangempela olubangelwa ukufudumala kwembulunga yonke. Yenziwe ngumcwaningi waseBrithani u-Ed Hawkins, futhi ikhombisa ngendlela elula ukuthi izinga lokushisa belikhuphuka kanjani kusukela ngo-1850, nokuthi sisondele kangakanani ukufinyelela ku-2 degrees Celsius.
Ukwanda kwamazinga okushisa yikhona okukhathaza kakhulu, bese kuthi kube okulula ukukuthola. Uma seqa umkhawulo we-2ºC, imiphumela izobulala. Futhi sinjalo kusondelene ukuwafinyelela.
U-Hawkins, osebenza eNational Centre for Atmospheric Sciences e-University of Reading, e-United Kingdom, uzimisele ngokukhombisa izinguquko esezivele zenzeka ngezindlela ezahlukene zokuthuthukisa ukuxhumana, obekuqondile. Futhi ngokusobala, uphumelele. I-GIF ikhombisa ukuvunguza kwe-polygonal lokho wethule imininingwane bheka nje.
Njalo ekuphendukeni imele ukwanda kwamazinga okushisa, ebelokhu lishintsha inyanga nenyanga nangeshumi leminyaka ngemuva kweminyaka eyishumi. Lapho ubona ukuthi zonke zijika ngendlela eyodwa, ekugcineni ugcina ngokukhathazeka, ngoba uthola umyalezo ocacile futhi oqondile: ukufudumala kwembulunga yonke kungokoqobo, futhi kusukela ngo-1850 akukayeki ukwenyuka. Lapha ungabona i-GIF:
Njengoba kungabonakala, kusukela ngo-1990 ukweqa okukhulu kwenzeka. Lolu daba lubucayi. Amarekhodi okushisa ayaphulwa muva nje njalo ngenyanga, futhi uma lokhu kuqhubeka, cishe kuqinisekile ukuthi ngaphambi kokuthi sicabange ukuthi izinga lokushisa lomhlaba jikelele lizobe lenyuke ngama-degree Celsius amabili asabekayo.
Ngakho-ke kuwusongo lwangempela okuzofanele sibhekane nalo ngokushesha okukhulu. Yize abaholi bomhlaba kuyibo abangenza okuningi ngomhlaba, izakhamizi ezijwayelekile zingenza futhi kufanele futhi zenze okuthile, kufaka phakathi Phinda usebenzise kabusha, sebenzisa futhi, ungangcolisi, noma londoloza amanzi.
Ngokubambisana singasithuthukisa isimo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Izexwayiso ze-GIF kusongo lwangempela lokushisa komhlaba
I-CO2LABORA, uhlelo lokusebenza lokufunda kabanzi ngokushintsha kwesimo sezulu